Village VOARA Andohatapenaka Tsy mbola nisy traboina nafindra hatramin’ny omaly
Voafonja eto Madagasikara “Tokony hampahafantarina ny antony amonjana azy !”
Niaro ny tsenan’ny tantsaha Namontana, resaka Andrefan’Ambohijanahary ary ity farany ity momba ny kianjan’Anosizato.
Fidinan’ny vidin-tsolika Tsy mampiova ny saran-dalana hatreto
Efa nilaza ny mpitatitra sasany fa kely ny fidinan’ny vidin-tsolika, ka tsy ahafahana mampidina saran-dalana, izay midika fa tsy nisy fiantraikany aloha hatreto.
Zaza very, olona tsy hita Misy ambadika politika ?
Ekena fa tena misy ny fakana an-keriny, izay fikatsahana tombontsoa ara-bola amin’ny endriny maro samihafa no tanjona, na io vola takalon’aina na varotr’olona tsotra izao, mety hanaovana trafikana taova ihany koa izay tsy mbola nahitana porofo mivaingana avy amin’ny mpanao fanadihadiana aloha hatreto.
Fametavetana zaza tany Nosy Mitsio Miantso ny Soisa hijery ny raharaha ny GIHTNB
Mipoitra indray ny raharaha fametavetana ankizy kely any Nosy Mitsio, Nosy-Be, izay mahavohirohy teratany Soisa iray. Taorian` ny fivoahan` ity resaka ity tamin` ireo haino aman-jery,
Tsy mbola nisy traboina nafindra hatramin’ny omaly eny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka. Raha ny vaovao azo teny an-toerana dia vao ny fanokafana ny trano no natao ary mbola arahina fikarakarana manokana izany.
Anisan’ireny ny famatsian-drano ho an’ny tokantrano tsirairay… Tsy mbola nahazo vaovao marim-pototra mikasika izay hahatongavan’ireo traboina eny an-toerana kosa ireo mpiambina ny tanàna. Raha tsiahivina, ny alahady lasa teo no niteny ny fitondram-panjakana fa hafindra eny amin’ny tanàna Voara eny Andohatapenaka sy eny Ambohidratrimo ireo traboina vokatry ny fianjeran’ny vato teny Ampamarinana sy Tsimialonjafy. Ho an’ity farany manokana raha ny fanazavan’ny sefom-pokontany omaly dia fianakaviana traboina miisa folo no alefa eny Ambohidratrimo hanorina fiainana vaovao ao anatin’ilay trano mora. Mbola miandry ny fanapahan-kevitra manaraka kosa ny sasany. Ho an’Ampamarinana indray dia mizarazara be ihany ny vaovao azo. Misy amin’ireo mponina mantsy no nahare feo fa alefa eny ambohitratrimo izy ireo raha misy ihany koa ny mahare fa alefa eny amin’ny tanàna voara Andohatapenaka ho an’ireo manaiky ny hiala. Nambaran’ny sefom-pokontany fa tsy omaly no hanatanterahana azy fa mety afaka andro vitsivitsy.